पेटको धर्सा देखिएर लज्जित हुनुपरेको छ ? उसोभए हटाउन यसो गर्नुहोस् पर्नुहुनेछ दंग – Krazy NepaL
January 30, 2021 489
एजेन्सी– मानिस एकै पटक मोटायो वा महिलाहरु गर्भवती हुँदा पेट, छाती, तीघ्राको छालामा यस्ता धर्साहरु देखा पर्छन् । यसलाई खास नौलो मानिदैन । एक पटक बसिसकेका धर्सा हटाउन त्यति सजिलो छैन । तर असम्भव पनि छैन । शरीरमा बसेका धर्सा हटाउने केही प्राकृतिक उपायहरु छन् ।
१. घ्यूकुमारीः घ्यूकुमारीलाई अचेल धेरैले एलोभेरा भन्दा चिन्छन् । एलोभेरा काटेर धर्सा परेको भागमा केही समय दल्नुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले धुनुहोस् । तपाई यो प्रक्रियामा एक चौथाई एलोभेराको जेल, भिटामिन ए, इको क्याप्सुललाई आपसमा मिसाएर पनि दिनहुँ दल्न सक्नुहुन्छ । केही दिनमा तपाईले आफ्नो छालामा आएको परिवर्तन महशुस गर्नुहुनेछ ।
२ पानीः पानीको उपचार तपाईले कहिल्यै महशुस नै गर्नुभएको छैन होला । तर छालाको सबैभन्दा राम्रो डाक्टर पानी नै होे । दैनिक १० ग्लास पानी पिउँनुहोस् । यसबाट तपाईलाई धेरै किशिमका छालासम्बन्धी समस्याबाट टाढा राख्न मद्यत पुग्छ । पानी पर्याप्त पिउँने गर्नाले छालामा भएका स–साना प्लानहरुलाई सफा राख्न र उपचारका अन्य विधि सफल बनाउन पानी आवश्यक हुन्छ । छाला सुन्दर बनाउन चाहनले चिया, कफि सोडाबाट चाहिँ बच्नै पर्छ ।
३ चिनीः चिनीमा पनि यस्तो धर्सा हटाउन सक्ने गुण हुन्छ । सेतो प्राकृतिक चिनी एक चम्चा, आल्मन्डको तेल थोरै र केही थोपा कागतीको झोल मिसाउनुहोस् । राम्रो मिश्रण तयार पार्नुहोस् र त्यसलाई धर्सा भएको स्थानमा लगाउनुहोस् । १० मिनेटपछि धुनुहोस् । एक महिनासम्म यसो गर्नाले तपाईको छालामा आएको परिवर्तन हेरेर आफै दंग हुनुहोस् ।
४. ओलिभ आयलः ओलिभ आयलमा महत्वपूर्ण पोषक, एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ । जसले तपाईको छालालाई स्वस्थ राख्न मद्यत गर्छ । ओलिभ आयलले धर्सा भएको स्थानमा मसाज गर्नुहोस् । एकघण्टा पछि धुनुहोस । ओलिभ आयलमा भएको भिटामिन ए, डी र इले छालालाई सुन्दर बनाउँछ ।
५. आलुको जुसः धेरै किशिमका भिटामिन र खनिज आलुमा हुन्छ । यसले छालाको कोष निर्माण र उपचारमा सघाउ पुर्याउँछ । आलुलाई स्लाइसलाई जस्तै पातलो गरेर काट्नुहोस् । त्यस्तो स्लाइसलाई धर्सा भएको स्थानमा केही मिनेट दल्नुहोस् । छाला सुख्खा भएपछि मन तातो पानीले धुनुहोस् । यी पाँच मध्ये तपाईलाई जुन सजिलो हुन्छ, त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
Prevमात्र एक रात भिजाएर मेथी दाना सेवन गर्नाले हुन्छ ग्यास्ट्रिक चट !
Nextगायिका अन्जु पन्त दोस्रो बिबाह गर्दै सार्वजनिक गरिन आफ्नो हुनेवाला श्रीमान हेर्नुहोस (भिडियो)